ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကား
မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီး မြန်မာစာကို မှန်အောင် မရေးနိုင်မှာ ကျွန်မ အလွန်ပဲ စိုးရိမ်မိပါတယ်။ တခါမှလည်း မြန်မာစာ သတ်ပုံကျမ်းတွေ၊ ဘာတွေ မဖတ်ဘူးတဲ့အတွက် ကိုယ်ရေးသမျှ အမှန်လို့ စိတ်မချနိုင် ဖြစ်ရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် (ပြီးခဲ့တဲ့ တနှစ်လောက်က) အန်တီငြိမ်းက "မြန်မာစာ သတ်ပုံကျမ်း"စာအုပ်ကို pdf ဖိုင်နဲ့ ပို့ပေးသော်လည်း ကိုယ်ရေးတာ မှန်မှာပါလို့ ယုံကြည်ချက်အနည်းငယ်နဲ့ သတ်ပုံကျမ်းကို တခါပဲ ဖွင့်ဖတ်ဖူးပါတယ်။ မနေ့ကမှ အန်တီငြိမ်းပေးထားတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့၊ မြန်မာစာ သတ်ပုံကျမ်းလိုပဲ ကျွန်မ တခါမှ ဖွင့်မကြည့်ဖြစ်တဲ့ "မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကား"ဆိုတဲ့ pdf ဖိုင်ကို ဋ္ဋီကာ(တီကာ)ရဲ့ အသံထွက် ရှာတွေ့လို၊ ရှာတွေ့ငြား ဖွင့်ဖတ်မိတယ်။ အရင်က ဋ္ဋီကာ ကို ကျွန်မက ဏီကာတို့၊ လီကာတို့ အသံထွက်ပါတယ်။ အခုမှ တီကာလို့ အသံထွက်ရမှန်း သိတယ်။ :D ဋ္ဋ(တသလင်းချိတ်) ပါဆိုမှ တ(တ၀မ်းပူ) အသံထွက်ရမှာကို ကျွန်မ သတိမမူမိဘူးလေ။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မ သိလိုတာတွေ ရှိဦးမလား ဆက်ဖတ်ရင်းနဲ့ ကျွန်မ အမြဲ မသဲမကွဲဖြစ်ရတဲ့ အရေးအသားတချို့ကို တွေ့ရတော့ ကျွန်မလိုပဲ ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်နေသူများအတွက် ပြန်လည် မျှဝေချင်လာပါတယ်။
ဖက် နှင့် ဘက်
အနက်သဘောအားဖြင့် ဖက် မှာသာ အနက်ရှိပေသည်။ ဘက် မှာ အနက် မရှိပါ။ သို့ရာတွေ အရာဌာနတိုင်း အနက်စွဲရေးပြီး၊ ရေးသည့်အတိုင်း အသံထွက်ရိုး မရှိပါ။ ရေးတော့ အမှန်၊ ဖတ်တော့ အသံ ဟု ပြောစမှတ်ပြုသည်။ ဤသည်ကို လိုက်၍ အသံအတိုင်း ရေးကြရသည်လည်း ရှိသည်။ အသံစွဲ အရေး ဟုဆိုနိုင်သည်။ ဖက် နှင့် ဘက် လည်း သည်အတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဖက် ကား အနက်စွဲအရေး၊ ဘက် ကား အသံစွဲအရေး။
ဖက် ကို အောက်ပါတို့၌ သုံးသည် ---
၁။ ကြိယာ ဖက်
သာဓက။ ။စုံဖက်၊ စွက်ဖက်၊ ဖက်စပ်၊ ဖက်တွဲ၊ လိုက်ဖက်၊ ယှဉ်ဖက်၊ ဆွဲဖက်၊ တွဲဖက် စသည်တို့ကဲ့သို့သော ကြိယာများ။
သာဓက။ ။ကူဖော်လောင်ဖက်၊ ကြင်ဖော်ကြင်ဖက်၊ ဆေးဖော်ကြောဖက်၊ ဆေးဖော်ဝါးဖက်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ သွားဖော်လာဖက် စသည်တို့ကဲ့သို့သော ဖော်_ဖက် တွဲလုံးများ။
၃။ သင်္ချာနှင့်တွဲသော ဖက်
သာဓက။ ။တဖက်တချက်၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်၊ သုံးဖက်မြင်၊ လေးဖက်နာ၊ အနားငါးဖက်ပဉ္စဂံ၊ လေးလုံးခြောက်ဖက် စသည်ဖြင့် ရှေ့တွင် အရေအတွက် သင်္ချာပါသော အရေးအသားများ။
ဘက် ကို အောက်ပါတို့၌ သုံးသည်---
၁။ အရပ်မျက်နှာနှင့်တွဲလျှင် ဘက်
သာဓက။ ။အရှေ့ဘက်၊ အနောက်ဘက်၊ တောင်ဘက်၊ မြောက်ဘက်။
၂။ တည်နေရာနှင့်တွဲလျှင် ဘက်
သာဓက။ ။အိမ်ဘက်မှာ၊ ဈေးဘက်မှာ၊ မြစ်ဘက်မှာ၊ ရွာဘက်မှာ၊ တောဘက်မှာ၊ ၀ဲဘက်၊ ယာဘက်။
၃။ သူ၊ ငါ၊ ကျား၊ မ စသည်နှင့်တွဲလျှင် ဘက်
သာဓက။ ။ သူ့ဘက်၊ ငါ့ဘက်၊ ကိုယ့်ဘက်၊ ယောက်ျားဘက်၊ မိန်းမဘက်၊ လင်ဘက်၊ မယားဘက်၊ အဖေ့ဘက်၊ အမေ့ဘက်၊ ဆရာ့ဘက်၊ တပည့်ဘက်။
၄။ အာဒိစကားလုံး (အစ စကားလုံး) ဖြစ်လျှင် ဘက်
သာဓက။ ။ဘက်ကန်၊ ဘက်စုံ၊ ဘက်ပေါင်းစုံ၊ ဘက်လိုက်၊ ဘက်မလိုက်။
ဤတွင် ခြွင်းချက် တခုရှိသည်။ အဖော်အဖက်မှန်သမျှကို ဖော်_ဖက်ဟု ဖဦးထုပ်နှင့် ရေးသော်လည်း ရဲဘော်ရဲဘက်၊ ရဲဘော်၊ ရဲဘက် တို့ကိုမူ ဘကုန်းနှင့်ပင် ရေးရန်ဖြစ်သည်။ အရေးတွင်ကျယ်မှုအရ ခြွင်းချက်ဟု မှတ်နိုင်သည်။
သူငါကျားမ၊ အာဒိစ၊ ရေးကြဘကုန်းနှင့်။
ယှဉ်လျက်သင်္ချာ၊ ရေတွက်ခါ၊ ရေးပါဦးထုပ်နှင့်။
နောက်ရက်မှ ဖူး နှင့် ဘူး ကွဲပြားရေးသားပုံကို ကူးယူပြပါဦးမယ်။
ရေးပြီးချိန်: 9/10/2008 02:36:00 PM
သိသင့်တာလေး ဝေမျှတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ့်မိခင်စကားပဲ ဆိုပြီး၊ ပုံသေယူ စိတ်ချလို့ မရတာတော့ အမှန်ပဲ။ ကိုယ်ကမှ မသေချာရင် ကိုယ်ကတဆင့် ထပ်ပွါးရမယ့်သူတွေ လက်ထက်မှာ ဘာဖြစ်သွားမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားစိုးရိမ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ဘာသာစကား ပျောက်ရင် လူမျိုးပါ ပျောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးကို အလေးအနက် သဘောထားမှ တန်ကာကျမယ်လို့ သဘောထားပါတယ်။ ထပ်ရေးမှာတွေအတွက် ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ထားလိုက်တယ်နော်။
i dont know where you live and what kind of job you do. but really appreciated you can spend time for such burmese things in this busy world. go on
မနုသွယ်၊ ကိုစတိဗ်... မင်္ဂလာပါ။ s0wha1 လည်း မသဲမကွဲဖြစ်နေတာလေးတွေ တွေ့လို့ ဘလော့ဂ်မှာ တင်ဖြစ်တာပါ။ :)